'Flavorary Cherry Vaovao' vao nilatsaka ny tranofiara voalohany, Art Art
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly 'Flavorary Cherry Vaovao' vao nilatsaka ny tranofiara voalohany, Art Art
by Waylon Jordan Jolay 30, 2021 1,705 hevitra
Flavor Cherry Vaovao dia kasaina hatao premiere amin'ny Netflix tamin'ny 13 Aogositra 2021 ary nahazo ny paositera sy ny tranofiara fijerinao voalohany izahay!
Tany amin'ny taona 90 dia manaraka an'i Rosa Salazar ity andiany ity satria i Lisa Nova, mpamokatra horonantsary fatratra izay mandeha any Hollywood hitady fialan-tsasatra lehibe. Fa kosa mandatsaka lavaka bitro misy ody, firaisana ara-nofo, valifaty… ary zanak'omby izy?
I Salazar dia mitarika mpilalao sarimihetsika anisan'izany i Catherine Keener (Mivoaha), Eric Lange (Antebellum), Jeff Ward (Mpitantana ny SHIELD), ary Manny Jacinto (Fotoana ratsy ao amin'ny El Royale).
Ny andiany voafetra dia noforonin'i Nick Antosca (Ny lalàna) ary Lenore Zion (Channel Zero) ary mifototra amin'ny tantara misy ny anarana mitovy amin'i Oregon = mpanoratra miorina, Todd Grimson. Flavor Cherry Vaovao navoaka voalohany tamin'ny taona 1996, ary vetivety dia nahazo karazana fivavahana hafa, na dia somary henjana aza ny fanehoan-kevitra momba ilay tantara. Fitiavana izany na fankahalàna ny zavatra niainany. Handeha fizarana adiny valo mandritra ny andiany ao amin'ny Netflix ity andiany ity.
Netflix dia namoaka teaser voalohany vao herinandro lasa izay, ary ny tranofiara vaovao dia mivelatra amin'izay hitanay tao, milaza bebe kokoa momba an'i Lisa Nova sy izay mitarika azy amin'ny horohoro atrehiny amin'ny farany rehefa milalao ao amin'ny "Season of the Witch" ambadika. Ny zavatra tsara indrindra momba izany dia ny tsy fanomezana be loatra ho an'ireo izay mbola tsy namaky ny loharano nalaina.
Tianay ny volavolan-doko, ny vibe, ny akanjo, ny zavatra rehetra, saingy aza raisina ny teninay. Zahao ireo afisy sy ny tranofiara etsy ambany ireo!